Austria: Soomaali iyo Afgaanistaan isku faro-saartay xero qoxooti iyo wiil soomaali ah oo isbitaalka loola cararay - NorSom News
Austria: Soomaali iyo Afgaanistaan isku faro-saartay xero qoxooti iyo wiil soomaali ah oo isbitaalka loola cararay
Sida uu qorayo wargeyska Salzburg ee dalka Austria, xero qoxooti oo kutaal magaalada Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) ayaa waxa uu dagaal gacan ka hadal ah ku dhexmaray koox soomaali iyo Afgaanistaani ah, kuwaas oo kaamka ku wada noolaa.
Wiil soomaali 17-sano jir ah ayaa la sheegay in dhacdadaas owgeed uu kasoo dhacay daaqada dabada labaad ee xeradaas uu dagaalku ka dhacay, waxaana soo gaaray dhaawacyo daran, iyada oo markii danbe loo cararay isbitaalka, sida ay xaqiijiyeen booliska magaaladaas.
Booliska magaalada Purkersdorf ayaa sheegay inay dhacdadaas usoo qabteen dhowr qof oo qaarkood ay xabsiga dhigeen.
Dalka Austria waxaa dhowrkii sano ee ugu danbeeyay magangalyo soo weydiistay boqolaal soomaali ah, kuwaas oo u badan dhalinyaro.
Previous articleDenmark: Dumarka Afrika waa inay adeegsadaan daawooyinka dhalmada ka hortaga, si looga hortago Tahriibayaasha ka imaada qaarada Africa
Next articleSSB: Waa sidee heerka aqooneed iyo xaalada waxbarasho ee jaaliyada soomaaliyeed ee Norway?